DEG DEG:- Seddax askari oo goordhaw lagu dilay Ex-Control Balcad ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Seddax askari oo goordhaw lagu dilay Ex-Control Balcad ee magaalada Muqdisho
Kooxo hubyesan oo loo maleynayo iney ka tirsan yihiin Xarakada Al-shabaab ayaa goordhaw isgoyska Ex-control Balcad ee magaalada Muqdisho ku dishay seddax askari oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya.
Dad goob-joogayaal ah oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa u sheegay in koox hubeysan ay dileen seddaxdaan askari oo ka tirsaneyd ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya, islamarkaana ka qaatay hubkii ay wateen.
Kooxdii dilka geystay ayaa islamarkiiba goobta ka baxsaday, iyadoona goobtaasi ay soo gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, oo howgalo baaritaano ah halkaasi ka bilaabay.
Ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda dilka seddaxdaasi askari ama ay ciidankaasi howgladaasi kusoo qab-qabteen.
Sidoo kale, ma jirto wax war ah oo ilaa iyo haatan kasoo baxay saraakiisha amniga ee gobolka Banaadir, kaas oo ay kaga hadlayaan dilka goordhaw loo geystay seddaxdaasi askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan waxaa magaalada Muqdisho dilal qorsheysan loogu geystaa siyaasiyiinta, ciidanka dowladda, odayaal dhaqameed, iyo sidoo kale shaqsiyaadka waxtarka ku leh bulshada Soomaaliyeed, waxayna dowladda federaalka Soomaaliya ku guul-dareysatay inay arrinkaasi wax ka qabato.